Bukavu sy ny Sisintany Roandey-Kongoley: Tanàna Anaty Ady · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2017 17:56 GMT
(Marihana fa efa nivoaka tamin'ny volana Mey 2007 ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Tanànan'ireo tafavoaka velona i Bukavu. Nandritra ny ady voalohany tao Kongo (1996-1997), nalaina an-keriny i Bukavu nandritra ny ady nifanoheran'ny ny tafiky ny fitondrana Tutsi tamin'ny Hutus, nialokaloka tao amin'ny faritra ireto farany ireto taorian'ny fandripahana tao Roandà. Nifanandrina tao ireo tafiky ny fitondrana sy ny mpikomy nandritra ny ady faharoa tao Kongo (1998-2003). Tamin'ny taona 2004, niharan'ny faneren'ireo miaramilan'ny Jeneraly Nkunda, jeneraly mpisintaka, mpanohana ny Tutsi ny tanàna, tao anatin'ny telo andro, vehivavy 16.000 no voavetaveta.
Mbola manjaka ao Bukavu ny tsy fandriampahalemana sy ny herisetra. Mitohy ny fanafihana ataon'ny FARDC sy ny ady ao Kivu-Avaratra.
Mbola tsy nitondra filaminana sy fitoniana nampanantenaina ny fifidianana filoham-pirenena. Manontany tena i Kakaluigi hoe ny tombontsoan'ny vahoakan'i Bukavu sa ny tombontsoan'ny fitondrana Roandey no katsahin'ny filoha Kongoley Joseph Kabila .
Bukavu, marainan'ny 20 May 2007. Mangina tanteraka ny zava-drehetra, saingy misy ny tahotra ao anatin'ireo mponinay. Feno rahona eny amin'ny faravodilanitra, izay tsy manome fanantenana tsara. Tsy fantatray izay tiana aleha, sy ny hoe antoko iza no hironan'i Kabila. Mivoaka ny fanontaniana hoe: Iza moa no tena resahany, ny Kongoley sa ny Roandey. Sa miaraka amintsika izy mandritra ny tontolo andro, ary miaraka amin'i Kigali amin'ny alina.
Mahatonga anay hieritreritra zavatra maro loatra izay tsy mazava mihitsy ny tantaran'i Nkunda. Tsapako fa ny toe-javatra mitovy tamin'ny taona 1998, angamba, dia miomana mangingina, (na dia tsy misy aza), angamba amin'ny fahavononana amin'ny politika iraisampirenena nisy 9 taona lasa, satria betsaka ny zavatra niova tamin'izany.
Saingy mazava kokoa fa manana fahefana ao Kongo mikasika ny tombontsoa ho an'ny vahoaka i Roandà. Nahazo herim-po sy fanantenana ny olona. Manantena izahay fa tsy ho diso fanantenana mihoatra noho ny fetra izy ireo . (PB)
Sary avy amin'i Julien Harneis: Sekoly garabola ao akaikin'i Bukavu, Repoblika Demaokratikan'i Kongo.